စာမျက်နှာ2– Gazunmyo
အဖော်အပင်လေးတွေ စိုက်ပြီး ပိုးမွှားထိန်းချုပ်ကြမယ်
သဘာဝအတိုင်းစိုက်မဲ့ စိုက်ပျိုးရေးသမားတွေ ပထမဆုံးလုပ်ရမှာကတော့ ကောက်ပဲသီးနှံတွေကို လူလုပ် ဓာတုပိုးသတ်ဆေးတွေမသုံးပဲ ဘယ်လို စိုက်ပျိုးမလဲဆိုတာပါပဲ။ ဒီပိုးသတ်ဆေးတွေက လူသားတွေအတွက် အန္တရာယ်ရှိတဲ့ အပြင် အရမ်းလဲဈေးမြင့်ပါတယ်။ စိုက်ပျိုးရေးသမားတွေနဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကတော့ ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ အစားထိုးနည်းလမ်းတွေကို ရှာဖွေနေကြဆဲဖြစ်ပြီး အခုနောက်ဆုံးဖြစ်နိုင်ချေရှိတာကတော့“အဖော် အပင်လေးတွေ’’ ကိုစိုက်ပျိုးတဲ့နည်းပါပဲ။ အဖော်အပင်လေးတွေဆိုတာ ဘယ်လိုအပင်လေးတွေဆိုတော့ အဖျက်ပိုးတွေကိုရှင်းထုတ်ပေးရုံသာမကပဲ ပင့်ကူလေးတွေနဲ့လေဒီဘတ်ကောင်လေးတွေအတွက် မှီတင်းနေထိုင် ရာလည်းဖြစ်တဲ့ စူးရှတဲ့ အနံ့တွေရှိတဲ့ ချုံပင်တွေ ၊ ဆေးဖက်နွယ်ဝင်အပင်တွေ ၊ သစ်ပင်တွေ နဲ့အခြားအသီးအရွက်တွေပါပဲ။ ကိုယ်စိုက်မဲ့ သီးနှံပင်တွေနဲ့ဒီလိုအပင်လေးတွေကို တွဲဖက်ပြီးစိုက်ပျိုးမယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ရဲ ့စိုက်ခင်းလေးမှာ ဇီဝမျိုးကွဲတွေပေါင်းဆုံရာနေရာလေးဖြစ်သွားပြီး Read more…
By Gazunmyo,6လ6လ ago
ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံက စိုက်ပျိုးရေးသမားတော်တော်များများဟာ (ကန်စွန်းရွက်၊စပါး၊မြေပဲစတဲ့) သီးပင်တစ်မျိုးကိုပဲ ဖိပြီးစိုက်လေ့ရှိတဲ့ “မိုနိုကာလ်ချာ” တစ်ပင်စိုက် ဓလေ့ ကိုကျင့်သုံးလေ့ရှိကြပါတယ်။ ဒီလို စိုက်ပျိုးကြတာက ကိုယ့်သီးနှံအထွက်နှုန်း များရင် ပိုပြီးငွေဝင်မယ်လို့ထင်ကြတာကြောင့်ပါပဲ။ ဒီစနစ်ရဲ့အဓိက အားနည်းချက်ကတော့ သဘာဝတရားကို မျက်ကွယ်ပြုထားတာပါပဲ။ ဒီလောက်ကျယ်တဲ့ စိုက်ခင်းကြီးမှာ သီးပင် တစ်မျိုး ၊ နှစ်မျိုးထဲကိုပဲ စိုက်မယ်ဆိုရင် ကိုယ့်စိုက်ခင်းထဲမှာ သဘာဝကို ချိန်ညှိပေးနေတဲ့ တခြားသစ်ပင်ကြီးတွေ၊ အပင်တွေ၊ အင်းဆက်လေးတွေကို ဖယ်ရှားပစ်လိုက်ရမှာပါ။ ဥပမာပြောရရင် ကိုယ့်စိုက်ခင်းလေးကျန်းမာနေဖို့သစ်ပင်တွေက အများကြီး အရေးပါပါတယ်။ ဒီသစ်ပင်တွေရဲ့အမြစ်တွေက မြေသားကို စွတ်စိုနေစေပြီး မြေကြီးထဲမှာနေထိုင်တဲ့ Read more…
တကယ်လို့မိတ်ဆွေက စိုက်ခင်းတစ်ခုကို အော်ဂဲနစ်စိုက်ပျိုးရေးနည်းတွေပဲသုံးပြီး စိုက်ပျိုးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ သဘာဝအတိုင်းပိုးမွှားထိန်းချုပ်ရာမှာသုံးတဲ့ အခြေခံလေးတွေကို သိထားသင့်ပါတယ်။ မိတ်ဆွေရဲ ့သီးနှံတွေနဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကို တိုက်ခိုက်နေတဲ့ အဖျက်ပိုးတွေကိုဖယ်ရှားပေးမဲ့ ရိုးစင်းတဲ့နည်းလမ်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ သဘာဝ အလျောက် ပိုးမွှားထိန်းချုပ် နှိမ်နင်းနိုင်တဲ့ စနစ်တစ်ခုကို ဖန်တီးမယ်ဆိုရင် ၆ လကနေ ၃ လအထိကြာနိုင်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အကျိုးပြုအင်းဆက်လေးတွေနဲ့မြေကြီးထဲကပိုးမွှားလေးတွေအတွက် စုံလင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခု ဖန်တီးနေတာမို့လို့ပါ။ သမားရိုးကျ ပိုးသတ်ဆေးတွေ သုံးရတာနဲ့တော့ မတူနိုင်ပါဘူး။ ဒီအဖျက်ပိုးတွေကို ရှင်းထုတ်ဖို့အတွက် ကမ်မီကယ်တွေ သုံးတာထက်စာရင် အကျိုးပြုပိုးမွှားလေးတွေကို သဘာဝက သူ့ဟာသူ ချိန်ညှိပေးတဲ့ နည်းလမ်းက ပိုပြီးကောင်းပါတယ်။ ဂေဟစနစ်မှာ မတူကွဲပြားတဲ့ Read more…
သဘာဝဂေဟစနစ်ဆိုတာဟာ ရှုပ်ထွေးကျယ်ပြောတဲ့ကမ္ဘာကြီး တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့တွေဟာ ကိုယ့်လယ်ယာတွေကိုဖျက်ဆီးနိုင်မယ့် ပိုးမွှားအန္တရာယ်လောက်ကိုသာ အလေးပေးဖြေရှင်းနေကြချိန် ဒီဂေဟစနစ်ကမ္ဘာမှာ ကိုယ်သတိမထားမိတဲ့ ပိုးမွှားတွေနဲ့သက်ရှိပေါင်းများစွာ ရှိသေးတယ်ဆိုတာကိုမေ့လျော့နေကြပါတယ်။ ပုံမှန်ဆိုရင် စိုက်ခင်းတွေပိုးကိုက်ပြီဆိုတာနဲ့လယ်သမားအများစုဟာ ပိုးသတ်ဆေး ပေါင်းသတ်ဆေး တို့ဖြန်းတာလောက်ပဲ အလွယ်လုပ်ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလိုမလုပ်ခင်မှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုအပင်လေးတစ်ပင်လို့ တွေးကြည့်လိုက်ပါလို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်။ အပင်တွေဆိုတာဟာလည်း ကျွန်တော်တို့လူသားတွေလို သက်ရှိမျိုးစိတ်တွေပါပဲ။ လူတွေလိုပဲ သူတို့မှာ ကိုယ်တွင်း ခုခံနိုင်ရည်စွမ်းအား ဆိုတာမျိုးရှိပါတယ်။ လူတွေပင်ပန်းအားနည်းတဲ့အခါ ဘာလို့အလွယ်တကူဖျားနာကြလဲဆိုတော့ ကိုယ်ခံအားတွေ နည်းကုန်လို့ပါ။ အပင်လေးတွေလည်း ဒီလိုပါပဲ။ ကျန်းမာနေတဲ့အပင်တွေကပဲ သူတို့ရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ ကိုယ်ခံအားကြောင့် ပိုးမွှားတွေကို ပြန်လည်တိုက်ထုတ်နိုင်မှာ Read more…
လူရောစိတ်ပါ ချုံးချုံးကျခြင်းမှ ကာကွယ်ပါ။
ရက်သတ္တပတ်လုံးအနားမယူပဲနဲ့ဆက်တိုက်အလုပ်ပဲလုပ်နေတာမျိုးက စိုက်ပျိုးရေးသမားတွေအတွက် စိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းဖြစ်စေမှာပါ။ မျိုးစေ့ချရတာကနေစပြီး ဖောက်သည်တွေဖုန်းဆက်မေးရတာကိုဖြေရတာ၊ လာမဲ့ ရာသီ အတွက် ငွေရေးကြေးရေးစီမံရတာတွေ အထိ တစ်ရက်နဲ့အပြီးလုပ်ရတာမျိုးတွေရှိပါတယ်။ ဒီလို တရစပ် အလုပ်လုပ်နေတဲ့ ကြားထဲက ပိုးကျတာတို့ အပင်တွေအကုန်လုံး နီးပါး ပြုတ်ပြုတ်ပြုန်းစေမဲ့ မုန်တိုင်းနဲ့ကြုံရတာမျိုးတွေ မျှော်လင့်ထားတဲ့ အခက်အခဲတွေကြုံရနိုင်ပါတယ်။ စိုက်ပျိုးရေးသမားတွေဟာပြဿနာတွေကိုကောင်းကောင်းဖြေရှင်းနိုင်တဲ့သူတွေမို့လို့အခက်အခဲတိုင်းကို စိတ်ဓာတ်ပြတ်သားခိုင်မာစွာနဲ့မျှော်လင့်ချက်နဲ့ ရှေ့ဆက်နိုင်တာသဘာဝပါ။ဒါပေမဲ့ တစ်ခါတစ်လေကျရင် ပတ်ဝန်းကျင်က အရမ်းစိတ်ရှုပ်စရာကောင်းလွန်းလို့အလျှော့ပေးချင်တဲ့ အချိန်ဆိုတာ ရှိလာမယ်။ ကမ္ဘာပေါ်က စိုက်ပျိုးရေးသမား တော်တော်များများအတွက်တော့ အကြွေးမဆပ်နိုင်မှာ ၊ စရိတ်မလောက်မှာ စိုးတဲ့ သောကတွေက အလုပ်မှာ Read more…
အရသာဟာ” ဦးစားပေး” ပါ ။
ဒီနေ့ခေတ်မှာ အသီးအနှံတော်တော်များများရဲ့ အရွယ်အစားနဲ့ စင်းလုံးချောဖြစ်ရေးကို ဦးစားပေးပြီးစိုက်ပျိုးလာကြတယ်။ ဝယ်သူတွေအတွက်တော့ ခရမ်းချဉ်သီး တစ်လုံး (ဒါမှမဟုတ်) တရုတ်မုန်ညင်းထုပ်တစ်ထုပ်ရဲ့ ပုံစံ၊ အရောင် နဲ့အရွယ်အစား က သူတို့တကယ်အရသာ ရှိလား ၊ မရှိလားဆိုတာထက် ပိုပြီးအရေးပါလာပါတယ်။ ဈေးဝယ်သူ တော်တော်များများဟာ အနာအဆာကင်း လတ်ဆတ်ပုံပေါ်တဲ့ အသီးအရွက်တွေ ကိုတော့ သေသေချာချာ ရွေးဝယ်ကြပေမဲ့ ပုံစံသိပ်မလှတာတို့အရောင်သိပ်မလှတဲ့ဟာတွေဆိုရင် ချောင်ထိုးပစ်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံးကျတော့ ဘယ်သူမှမလိုချင်တဲ့ အသီးအနှံတွေနဲ့ကိုယ်ပဲကျန်ခဲ့ရော။ ဒီလို အလေ့အထတွေကြောင့် စိုက်ပျိုးရေးသမားတော်တော်များများဟာ စင်းလုံးချောဖြစ်တဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကို မရမက စိုက်ပျိုးကြပါတော့တယ်။ Read more…
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် အထောက်အကူပြု ဓာတုပစ္စည်းကင်းစင် စိုက်ပျိုးရေး ဆိုတာ ဘယ်လိုမျိုးအရာလဲ ?
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကန်စွန်းမြို့စိုက်ခင်းလေးကတော့ အော်ဂဲနစ် စိုက်ပျိုးရေး အလေ့အထတွေကို ကျင့်သုံးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တော့ အော်ဂဲနစ် စိုက်ပျိုးရေးသမားရယ်လို့မသတ်မှတ်ဝံ့သေးပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့မှာ အော်ဂဲနစ် စိုက်ပျိုးရေး အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်မရှိသေးပါဘူး။ ဒါပေမဲ့လို့ အော်ဂဲနစ်လက်မှတ်ရှိတာ မရှိတာက ထွေထွေထူးထူး ပြောင်းလဲစေမှာမဟုတ်ပါဘူး လို့ကျွန်တော်တို့ ထင်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ လက်ရှိမြန်မာပြည်မှာ အော်ဂဲနစ် ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေအတွက် စားသုံးသူ ဝယ်လိုအားက အရမ်း မများတာကြောင့်ရယ် တရားဝင် အော်ဂဲနစ် အသီးအနှံတွေအတွက် ဈေးများများ ပေးဝယ်လိုတဲ့သူလည်း သိပ်မရှိတဲ့အတွက်ပါ။ ဒါကြောင့် အဲ့ဒီ့အစား ကိုယ့်ကိုယ်ကို သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အထောက်အကူပြုဖို့အတွက် Read more…
ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံး “အော်ဂဲနစ် ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ”နဲ့ “အော်ဂဲနစ် စိုက်ပျိုးရေး”ဆိုတာကို ခဏခဏ ကြားဖူးနေကြပေမဲ့ ဒီအရာတွေရဲ့ဆိုလိုရင်းက ဘာလဲ? ကျွန်တော်တို့စူပါမားကတ်တွေမှာဆိုရင် ဒီ “အော်ဂဲနစ်” ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေက ပုံမှန် အသီးအရွက်တွေထက်ပိုပြီး ဈေးများနေလေ့ရှိပါတယ်။ ဈေးများတဲ့ အတွက် အရည်အသွေးပိုကောင်းပြီး လူချမ်းသာတွေအတွက်ပဲလားလို့တောင် ကျွန်တော်တို့ ထင်ကောင်းထင်ဖူးမယ်။ ပြီးတော့ ဒီ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ နဲ့သီးနှံတွေက တကယ် အော်ဂဲနစ် ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကို ဘယ်သူကဆုံးဖြတ်တာလဲ ဆိုတာပါပဲ။ ယေဘုယျအားဖြင့် ပြောရရင်တော့ စိုက်ခင်းတစ်ခုကို အော်ဂဲနစ်စိုက်ခင်း လို့ ဘယ်အချိန်မှာသတ်မှတ်သလဲဆိုရင် စိုက်ပျိုး၊မွေးမြူရေးနဲ့ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန Read more…
ကိုယ့်မှာရှိတဲ့အရာကို အပြည့်အဝ အသုံးချကြပါစို့.
မြန်မာပြည်မှာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ရတာ ဘာအကောင်းဆုံးလဲဆိုတော့ သဘာဝသယံဇာတတွေ ပေါများကြွယ်ဝတာပါပဲ။အထူးသဖြင့် လယ်ယာမြေ(စိုက်ခင်း)တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့။ ကျွန်တော်တို့စိုက်ခင်းတွေမှာရှိတဲ့ အရာတွေကို အကောင်းဆုံးအသုံးချနိုင်မယ်ဆိုရင် ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေနဲ့သီးနှံတွေ စိုက်ပျိုးဖို့ကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ချနိုင်မှာပါ။ ဥပမာပြောရရင် အမှိုက်လို့ထင်ရတဲ့ မြက်ခြောက်တွေနဲ့သစ်ရွက်ခြောက်တွေကို မီးရှို့ပစ်လိုက်မဲ့အစား သိမ်းထားရပါမယ်။ ဒါမှ ကျွန်တော်တို့စိုက်ခင်းတွေ မြေဆွေးဖို့ဖို့အတွက် ၊ ဒါမှမဟုတ် မြေဆွေး ပြုလုပ်ဖို့အတွက် အသုံးပြုနိုင်မှာပါ။ ဒီလိုလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင် မြေသားက ကျန်းမာသန်စွမ်းတဲ့ အပြင် ဓာတ်မြေဩဇာအသုံးပြုမှုလျော့နည်းသွားမှာပါ။ နောက်ပြီး ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်အချို့ကိုမဆွတ်ခူးပဲနဲ့ရင့်မှည့်စေပြီး လာမဲ့ရာသီအတွက် အစေ့စုဆောင်းလို့ရပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ စိုက်ပျိုးရာသီတိုင်းမှာ မျိုးစေ့ဝယ်ရတာ ကို သက်သာစေမှာပါ။ Read more…
စိုက်ပျိုးရေးသမားဆိုတာက အသင်းအဖွဲ့နဲ့ အလုပ်လုပ်ရင်အကောင်းဆုံးပါပဲ။ ဒါမှ ကျွန်တော်တို့တွေဟာ အပြောင်းအလဲတွေကို ကြံ့ကြံံ့ခံပြီးကျော်လွှားနိုင်မှာပါ။ စိုက်ပျိုးရေးသမား အချင်းချင်း ဟာသတွေမျှဝေဖို့၊ လာမဲ့ရာသီအတွက် အစီအစဉ်တွေကို ဆွေးနွေးဖို့၊ စိုက်ပျိုးရေး နည်းစနစ်သစ်တွေ လေ့လာဖို့၊ ထမင်းတူတူတစ်နပ်လောက် လက်စုံစားဖို့၊ တစ်နှစ်လုံး ကြုံခဲ့ရတဲ့ ပြဿနာတွေ အတွက် တူတူ အဖြေရှာဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ စိုက်ပျိုးရေးသမားတွေက ဖြန့်ချိရောင်းချသူတွေ ၊ ပစ္စည်းအသယ်အပို့လုပ်တဲ့သူတွေ ၊ ဈေးကွက်ဖော်ဆောင်သူတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါမှ စိုက်ပျိုးထားတဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကို ဈေးဝယ်သူ ကာစတန်မာတွေရဲ့လက်ထဲကိုအရောက်ပို့ပေးနိုင်မှာပါ။ ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့စိုက်ပျိုးရေးသမားတွေအတွက်တော့ ကိုယ်စိုက်ပျိုးနေတဲ့ အစားအစာတွေကို အလေးထားပြီး Read more…